Kwintliziyo yelizwe lamalahle le-NSW, uLithgow ujika eluphahleni lwelanga kunye nokugcinwa kwebhetri yeTesla
IBhunga lesiXeko saseLithgow ligqithisile kwilizwe elinamalahle e-NSW, iindawo eziyingqongileyo zigutyungelwe zizikhululo zamandla ezisebenza ngombane (uninzi lwazo luvaliwe). Nangona kunjalo, ukungakhuseleki kokugcinwa kwelanga kunye namandla okucinywa kombane okubangelwe zizinto ezingxamisekileyo ezinje ngomlilo wehlathi, kunye neenjongo zebhunga lasekuhlaleni, kuthetha ukuba amaxesha ayatshintsha.
Inkqubo yeBhunga lesiXeko saseLithgow i-74.1kW ephezulu kwiZakhiwo zayo zoLawulo ihlawulisa inkqubo yokugcina ibhetri ye-Tesk engama-81kWh.
Ngaphaya kweeNtaba eziBlue nasesizweni seNew South Wales ilizwe lamalahle, phantsi kwezithunzi ezimfutshane zezikhululo zamandla zombane ezikufuphi (enye, iWallerawang, ngoku evalwe yi-EnergyAustralia ngenxa yokuswela imfuno), iBhunga lesiXeko saseLithgow livuna I-PV yelanga kunye neTesla Powerwalls ezintandathu.
Kutshanje iBhunga lifake inkqubo ye-74.1 kW kwi-Building Building apho ichitha ixesha layo ihlawulisa i-81 kWh inkqubo yokugcina amandla eTesla ukwenza imisebenzi yolawulo ebusuku.
"Inkqubo izakuqinisekisa kananjalo ukuba isakhiwo solawulo sebhunga singahlala sisebenza kwimeko yombane oshiyekileyo," utshilo uSodolophu weBhunga lesiXeko saseLithgow, uCeba uRay Thompson, "othetha ngokuphucuka kokuqhubeka kweshishini kwiimeko zongxamiseko."
I-81 kWh yexabiso leTesla Powerwalls ezidityaniswe nee-inverters zikaFronius.
Ewe ixabiso alinakubekwa kukhuseleko kwiimeko zongxamiseko. Kuyo yonke i-Australia, ngakumbi kwimimandla ethanda umlilo (ngenxa yoko, ikakhulu kuyo yonke indawo), iindawo zoncedo olungxamisekileyo ezibalulekileyo ziyaqala ukuqaphela ixabiso lokugcinwa kwelanga kunye namandla kunokubonelela kwimeko yombane oziswe yimililo ebanzi.
NgoJulayi kulo nyaka, isikhululo somlilo eMalmsbury eVictoria safumana ibhetri ye-13.5 kW Tesla Powerwall 2 kunye nenkqubo yelanga ehamba ngesisa kunye nenkxaso-mali evela kwiBhanki yase-Australia kunye nenkqubo ye-Central Victorian Greenhouse Alliance yoLuntu yokuThengwa kweSolar Bulk.
"Ibhetri iqinisekisa ukuba singasebenza kwaye siphendule kwisikhululo somlilo ngexesha lokucinywa kombane kwaye inokuba yindawo yokuhlala eluntwini ngaxeshanye," utshilo uKapteni wezokucima umlilo eMalmsbury uTony Stephens.
Ukuba isikhululo somlilo ngoku asinakucinywa kukucinywa kombane, uStephens uyavuya ukuqaphela ukuba ngamaxesha okuphela kunye nengxaki, "amalungu oluntu achaphazelekayo angayisebenzisa ukunxibelelana, ukugcina amayeza, ukukhenkcisa ukutya kunye ne-intanethi kwiimeko ezimbi kakhulu."
Ukufakwa kweBhunga lesiXeko saseLithgow kuza njengenxalenye yesiCwangciso seQhinga loLuntu seBhunga lowama-2030, esiquka iminqweno yokwanda kunye nokusetyenziswa ngokuzinzileyo kweminye imithombo yamandla, kunye nokunciphisa ukukhutshwa kwefosili.
“Le yenye yeeprojekthi zeBhunga ezijolise ekuphuculeni ukusebenza kakuhle kombutho,” uqhubeke watsho uThompson. "IBhunga kunye noLawulo bayaqhubeka nokujonga kwikamva kwaye basebenzise amathuba okwenza izinto ezintsha nokuzama into entsha yokuphucula iLithgow."